Sida loo tolo mashiinka, tallaabooyinka aasaasiga ah ee lagu barto tolida
Sida mashiinka loo tolo
Haddii aad hore u go'aansatey inaad iibsato mashiinkaaga tolida, hambalyo! Hadda waxaad u baahan tahay oo kaliya qaar ka mid ah fikradaha aasaasiga ah si aad awood ugu yeelatid inaad qaaddo tallaabooyinka ugu horreeya. Sida aad qiyaasi karto, ku celcelinta ayaa lama huraan u ah bartaan tolida mashiinka.
Laakiin marka hore, waxaad u baahan tahay inaad barato naftaada dhinacyo gaar ah si aad u ogaato sida mashiinka loo toloXitaa haddii aadan wax khibrad ah u lahayn. Halkan waxaan kugu hagi doonaa si aad u bilowdo mid ka mid ah waddooyinka ugu madadaalada badan kaas oo kuu horseedi doona inaad ogaato adduunka cajiibka ah ee tolida.
Qaybo ka mid ah mashiinka tolida oo ay tahay inaad ogaato
Waxaad haysataa mashiinkaaga tolida ka hor, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato qaybaha ay ka samaysan tahay. Maadaama ay midawga dhammaantood ka dhigi doonaan shaqadayada mid fulisa. In kasta oo aan ognahay in, iyada oo ku xidhan nooca mishiinka su'aasha, qaar ka mid ah badhamada ama hawlahooda kala duwanaan karaan, inta badan waxay leeyihiin iyaga.
roulette Machine: Xaaladdan oo kale, waxaa loo yaqaan in jidka in wheel in uu leeyahay dhinaca. Marka aan u rogno, waxay na siinaysaa ikhtiyaarka ah inaan gujino ama irbadda ka saar dharka. Aad bay lagama maarmaan u tahay marka la yiraahdo irbaddu way ku dhegtaa. Sidoo kale halkii aad ka isticmaali lahayd baallaha mishiinka, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo leexinaya giraangirahan, sidaas darteed, waxaad u socon doontaa si tartiib tartiib ah laakiin hubaal ah.
Badhamada lagu dooranayo tolida: Shaki la'aan, badhamada aan heli doono waxay noqon doonaan balac tol iyo dherer tol. Mid kasta oo iyaga ka mid ah, waa inaan dooranaa lambar, iyadoo ku xiran waxa aan u baahanahay. Haddii aan doorano 0, waxay noqon doontaa marka aan rabno inaan samayno dhowr tol oo isku mid ah, taas oo ah, xoojinta. Tolmada 1 waa kan ugu gaaban wuxuuna ku habboon yahay godad badhannada. Dusha sare ee caadiga ah, waxaad dooran kartaa nambarka 2. Tolmo waaweyn sida nambarka 4 ama 5 ayaa loogu talagalay baastada.
kabaalka dib-u-celinta: Mashiinadu waxay badanaa leeyihiin kabaal yar oo muuqda. ma isaga badhanka gadaale. Markaa waxaan u isticmaali doonaa si aan u dhamaystirno tolmada.
Xiisadda dunta: Qaybta sare ee mishiinka waxaan ku haynaa xirayaasha bobbin. Meelaha duntu ka baxdo. Iyadoo ku xiran dhumucda dunta, waxaanu hagaajin doonaa dun yar. Laakiin sida caadiga ah, haddii dunta la sheegay waxaan ka dooran karnaa 0 ilaa 9, waxaan joognaa lambarka 4. Markay yihiin maro ka dhumuc weyn ama lidkeeda, aad u dhuuban, markaa waa inaad ku hagaajisaa nambarada iyaga.
Cagaha riixaya: Hadda waxaan aadeynaa qaybta cirbadda oo waxaan heleynaa cagta riixista. Waan kor u qaadi karnaa ama hoos u dhigi karnaa, iyada oo ay ugu wacan tahay kabaal yar oo badanaa ku yaal dhabarka mashiinka. Waayo dun koronto, waa in had iyo jeer la dhejiyaa.
Saxanka tolida: Waa saldhigga, halka irbadda iyo cagtu ku fadhiistaan. Sidoo kale aaggan waxaan ku arki doonaa waxa loogu yeero ilkaha quudinta.
Canillero: Mashiinadu inta badan waxay leeyihiin nooc ka mid ah khaanadaha yar yar ee meesha laga saari karo. halkaas ayaan ka heli doonaa kiiska bobbin ee noqon doona macdan oo aad u fudud in meesha laga saaro. Kaliya waa inaad simbiraa tab hore. Gudaha kiiska bobbin, waxaanu ka heli doonaa bobbinka duntiisa.
Talaabooyinka hore ee lagu baranayo tolida mishiinka
Hadda oo aynu ognahay qaybaha, aynu gelino mishiinka si ay u isticmaalaan. Inkasta oo wakhtigan xaadirka ah, kaliya dhaqan ahaan. Uma baahnin maro laakiin waxaan u baahanahay warqado. Haa, markaad akhriyayso. Waxa ugu fiican in la bilaabo mashiinka pedal master oo bal eeg sida ay u laxanka tahay waa sidan. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa daabacaadaha qaar warqad. Dabadeed, waxaad shid doontaa mishiinka oo waxaad dhigi doontaa warqad la sheegay sidii inay tahay marada aad toli lahayd. Waa inaad raacdaa khadadka iyo sawiro lagu daabacay xaashi kasta. Laakiin haa, xusuusnow in had iyo jeer la mashiinka iyada oo aan dun lahayn. Waanu ku celcelinaynaa. Marka hore waxay kugu kacaysaa xoogaa kharash ah inaad raacdo mid kasta oo ka mid ah khadadka. Laakiin ma quusan doonno marka ugu horreysa sidoo kale. Wax yar ayaanu arki doonaa in aanay ahayn wax sidaas u adag.
Sida loo bilaabo mashiinka tolida, dunta
In kasta oo aynaan weli tilmaan ka bixin, haddana waa markiisii. Haddii aad hore u ogaatay qaybaha ugu muhiimsan ee mishiinka, waxaad horeyba ugu dhiiratay inaad wax yar ku barato, hadda tallaabada xigta waxay bilaabmaysaa. Waxaan dooneynaa inaan dunno si aan u awoodno inaan siinno tolmooyinka ugu muhiimsan. The nidaamka dunta Waa wax ay dad badani ka baqaan. Ma jiraan wax runta ka fogaan kara. Waa tallaabo fudud, in muddo gaaban gudaheed aad samayn doonto ku dhawaad ​​iyadoo indhahaagu xiran yihiin.
Waxaan dhigi doonaa dunta oo dhex mari doonaa wicitaanka, hagaha dunta. Inta badan mishiinada, tillaabooyinka lagu gaarayo tan ayaa durba lagu sawiray. Laakin haddii ay wali ku siiso madax-xanuun, ogow sida ay u fududahay muuqaalkan oo kale.
Dabaysha dunta ama daalacashada bobbinka
Mid kale oo ka mid ah tillaabooyinka aasaasiga ah waa in la dabaylo bobbin. Sida aan horayba ugu soo aragnay qaybta qaybaha uu ka kooban yahay mashiinka tolida, waxaan helnaa qaboojiyaha bobbin. In yar ka hooseysa irbadda iyo cagta riixaya, waxaan u haynaa dalool. Halkaas waxaan ka heli doonaa gariiradda duntu leedahay. Xaqiiqda dabayshu waa in lagu buuxiyo dun uu yidhi bobbin. Waa maxay sababta ay muhiim u tahay?Sababtoo ah sidan ayaanu uga fogaan doonaa guntimaha dunta iyo sidoo kale dhididka. Marka hore waxaad ka saari doontaa bobbin, ka dibna waxaad siin doontaa dhowr wareeg oo dunta leh oo dhig. Markaad ku talaabsanayso baabuurka, dabayluhu wuu soo jeesan doonaa oo markuu bobbinku buuxsamo, waxaan joojin karnaa inaan ku talaabsano baallaha.
Barashada tolida aasaasiga ah
Tolmo toosan ama toosan: Waa tan ugu fudud oo in la bilaabo waa qumman tahay. Kaliya waa inaan dooranaa, ka dib, ldhererka tolnimada. Ma ahaan doonto mid aad u gaaban ama dheer, laakiin meel u dhaxaysa.
Tolmada Zigzag: Si looga hortago in maryaha ay jajabaan, ka dib waxaan dooran doonaa tolmada zigzag. Waxa kale oo aad dooran kartaa dhererkeeda, sidaas darteed xoojinta cidhifyada tolkaaga.
Waxaa jira mashiinada tolida oo aad ku samayn karto daloolka badhanka hal tallaabo. Dabcan, kuwa kale waxay na siinayaan wadar ahaan afar tallaabo si aan awood ugu yeelanno fulinta. Shaki la'aan, tayada ayaa mar hore aad u sareysa. Soo ogow sida ay u fududahay godka badhanka.
Sida magaceeda ka muuqata, waxay noqon doontaa a nooca tolnimada si dhib yar loo dareemi karo. Taasi waa sababta dunta la midka ah midabka dharka sida caadiga ah loo isticmaalo. In kasta oo nidaamkeedu uu sidoo kale aad u fudud yahay in la fuliyo.
Buugaag lagu barto sida loo tolo mashiinka
Dabcan, haddii lagu daro inaad ku raaxaysato fiidiyowyada iyo sharraxaadaha, waxaad dooneysaa inaad wax walba ku haysato gacanta iyo warqad, ma jiraan wax la mid ah buugaagta si aad u barato tolida mashiinka.
Halkan waxaan kuugu dayn qaar ka mid ah Buugaag badan oo lagu taliyay in la barto sida loo tolo mashiinka:
Buugga Wayn ee Tolidda
Tolida mishiinka. Aasaaska tolida
Tillaabo-Tallaabo Bilawga Hagaha Bilaabashada Gacanta iyo Tolida Mashiinka
Mashiinka dharka » Sida mashiinka loo tolo